XOG RASMI AH:- Doorashada madaxweynaha oo muddo 10 maalmood ah lagu darri doono waqtigii hore – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Doorashada madaxweynaha oo muddo 10 maalmood ah lagu darri doono waqtigii hore
Warar hoose aynu ka helnayno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa inoo xaqiijiyay in dib u dhac uu ku imaan doono doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo la filaayo inay dhacdo bishaan November 30-keeda.
Sarkaal ku sugan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya oo diiday inaynu magaciisa warbaahinta u isticmaalno ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh uu si hoose uga dalbaday guddiga doorashada in muddo 10 maalmood ah dib loo dhigo doorashada, maadaama aanay suurto-gal ahayn in muddo 6 maalmood kadib ay doorasho ku dhacdo.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu guddiga doorashada ka dalbaday in doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya la qabto 10-ka bisha December ee sanadkaan.
Sarkaalkaasi ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo aheyd inay maalintii shalay ahayd dhacdo, in la qaban doonno 30-ka bishaan aynu ku jirno ee November.
Bishaan 30-keeda ayaa qorshuhu wuxuu ahaa in la qabto doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, balse aanay xilligaan suurto gal ahayn inay xilligaasi ku dhacdo, maadaama ay weli harsan yihiin doorashada xubnaha ka mid noqonaya Aqalka hoose iyo sidoo kale tan guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.
Ugu dambeyn, guddiga doorashadda dadban ee dalka ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan inuu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashadda madaxweynaha iyo tan guddoonka baarlamaanka, iyagoona kadib si toos ah u shaacin doono xilliga kama dambeyska ah oo ay ku dhacayaan doorashooyinkaas.
Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayay ahayd inay dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo kuxigeenadiisa, waxaana haatan muuqata inuu sidoo kale dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo muddo 10 maalmood lagu dari doonno waqtigii hore loogu qorsheeyay inay ku dhacdo.